Sacuudi Carabiya oo markii ugu horeysay hoggaamineysa dalalka ka tirsan G-20 – Maanta Online
Sacuudi Carabiya oo markii ugu horeysay hoggaamineysa dalalka ka tirsan G-20
Shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay dalka Japan ee ay isugu yimaadeen madaxda dalalka ka tirsan ururka G-20 ee dhaqaalaha ku horumaray ayaa waxaa xilkaasi markii ugu horeysay loo doortay inuu hoggaamiyo dalka Sacuudi Carabiya oo leh shidaalka ugu badan wadamada Khaliijka.
Ra’iisal Wasaaraha dalka Japan Shinzo Ape oo horay u ahaa guddoomiyaha dalalka G-20 ayaa xilka ku wareejiyay dhaxal sugaha da’da yar ee boqortooyada Sacuudiga Ahmed Bin Salman, halkaasi oo dhaxal sugaha loogu hambalyeeyay xilka cusub ee loo doortay.
Mohamed Bin Salman oo halkaasi ka jeedinayay khudbad uu uga hadlayay xilka ay u doorteen 20-ka dal ee ku horumaray dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay in dalkiisa uu martigelinayo kulanka sanadlaha ah ee madaxda ka tirsan isbaheysigaasi bisha Febraayo ee sanadka 2020-ka.
Amiirka Sacuudiga ayaa sheegay in kulankaasi ay sidoo kale ka qeyb gelayaan madax, wufuud iyo diblomaasiyiin ka socda dalalka caalamka intooda badan, taasi oo uu sheegay inay qeyb ka tahay sidii la isku dhaafsan lahaa kheyraadka iyo waxsoosaarka dalalka adduunka.
Hoggaaminta ururka G-20 ee dalka Sacuudiga ayaa ku soo beegmeysa xilli xukuumadda dalkaasi lagu eedeynayo inay tacadiyo kala duwan ku heyso siyaasiyiinta iyo dhinacyada mucaaradka ku ah hab maamulka Boqor Salman.
Tan iyo markii talada dalkaasi boqorku ku wareejiyay wiilkiisa Mohamed Bin Salmaan wuxuu sameeyay isbedello waaweyn oo soo jiitay indhaha dalalka caalamka, isagoona dalka Sacuudiga ka hirgeliyay sharciyo lagu qafiifinayo xorriyadda shacabka dalkaasi sida haweenka oo uu u ogolaaday inay gawaari kaxeysan karaan iyo kuwo kale.
XIGASHO – Wakaalado
← Adan Barre Ducale: “Xildhibaanimada Baarlamaanka Kenya haddii aan ku weynayo xitaa kama tanaasulayo Soomaalinimada”
DR. DUFLE: “10-sano kadib qaraxii qasaaraha badnaa ee Hotel Shamo ma hor istaagin inaan gaarno hadafkeena” →
Wasaaradda Arrimaha Guddaha oo soo saartay Warsaxaafadeed ku aadan Doorashada Jubbbaland.
Diyaaradda Uganda Airlines oo duulimaad toos ah ka bilaabeysa Muqdisho
Qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda oo soo saaray go’aano culus